Wafti uu hoggaaminayo R/wasaare Gaas oo galabta gaaray Kenya, kana qaybgali doona shir khuseeya Soomaaliya oo ka dhici doona Nairobi. – Radio Daljir
Janaayo 8, 2012 12:00 b 0
Nairobi, Jan 08 ? R/wasaaraha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa galabta gaaray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaddib markii duhurnimadii maanta ay ka dhoofeen Muqdisho.
R/wasaare Prof. Cabdiweli M Cali ?Gaas? iyo waftigiisa ayaa si diirran loogu soo dhaweeyey gegida diyaaradaha ee caalamiga ah ee Jomo Kenyatta, iyadoo soo dhaweyntiisana ay ka qaybgaleen mas?uuliyiin heer sare ah oo ka tirsan dawladda Kenya, wakiillada safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya iyo sidoo kale madax federaalka Soomaaliya ah oo halkaasi ku sugnaa.
Waftiga Gaas, ayaa socdaalkooda ay ku tageen dalka Kenya ku qotomaa ka qaybgalka shir quseeya arrimaha Soomaalida, kaasoo si gaar ah loogu eegi doono wax ka hirgalay qorshihii taabbo-galineed ee wadiiqada Raod-map-ka, ayna ka qaybgali doonaan daneeyayaasha arrimaha Soomaalida sida ay noo xaqiijiyeen mas?uuliyiin dawladda ka tirsani.
R/wasaare iyo waftigiisa oo ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Cabdullahi Goodax Barre, wasiir ku-xigeenka hawlaha guud iyo dib-u-dhiska Xareed Xasan Cali, wasiiru-dawlaha dekadaha gaadiidka, Saciid Jaamac Qoorsheel iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska R/wasaaraha oo uu ka mid yahay afhayeenka xukuumadda Eng. C/raxmana Cumar Cismaan ?Yariisaw, ayaa la filayaa safarkooda dibadeed in uu qaadan doono muddo ka yar hal asbuuc.
Waftigaan ayaa lagu wadaa marka ay dhammaystaan ka qaybgalkooda iyo safarkooda Kenya in ay iyana tagaan Jamhuuriyadda Jabbuuti, halkaasi soo sida wararku tilmaamayaan ay ka heleen martiqaad rasmi ah.
Wasaaradda Shaqada & Shaqaalaha Puntland oo kormeertay shaqaalaha dawladda iyo kuwa madaxbanaan ee magaalada Galkacyo.